Izindaba - Umsebenzi Wokwakhiwa Kwethimba.
Ukuze kuvuselelwe uthando lwabasebenzi ngomsebenzi, ukusungula ukuxhumana okuhle, ukwethembana, ukubumbana nokubambisana phakathi kwabasebenzi, ukuhlakulela ukuqwashisa kwethimba, ukukhulisa umuzwa wokuzibophezela nokuzibandakanya kwabasebenzi, futhi ubonise isitayela seSanniu Company, ngoMeyi 29, 2021, bonke abasebenzi beYantai Sanniu Import and Export Co, Ltd. babambe iqhaza emsebenzini wokwakha iqembu.
Ngehora lesishiyagalombili ekuseni ngoMeyi 29, sonke sahamba ngebhasi saya esikhungweni semfundo esezingeni eliphakeme e-Weihai ukuyoqeqeshwa kwangaphandle. Ukuqeqeshwa okuboshwe ngaphandle kuyisistimu yenqubo yokuqeqesha ukubumba ubungqabavu beqembu, ukukhuthaza ukukhula kwenhlangano, nokuhlala uzengeza inani kuwe. Kuyisethi yokuqeqeshwa kwangaphandle kokulingisa okwenzelwe ngokukhethekile ukwakha iqembu lwanamuhla.
Ngaphambi kokuqeqeshwa okusemthethweni, umqeqeshi kuqala ngokubala kwabo abafanele ukuqeda ukwabiwa kweqembu. Ngemuva kwalokho ilungu ngalinye leqembu likhetha ukaputeni, futhi ngaphansi kokuqondiswa kukaputeni, baxoxa ngegama leqembu labo, uphawu lweqembu nesiqubulo. Sinamaqembu amabili, ama-Tigers asawolintshi nama-Dragons aluhlaza okwesibhakabhaka. Bese kuthi ngaphansi kokuholwa ngumqeqeshi, wonke amalungu eqembu abambe iqhaza emincintiswaneni nasemisebenzini, efana neTrust Back Fell, iDrum Life, EscapeWwonke namanye amaphrojekthi. Sonke saqhubekisela phambili umoya wokusebenza kanzima, ukubekezela, singapheli amandla, futhi saqeda yonke imisebenzi eyinselele. Kusihlwa, sasiba nenyama yokosa ngomlilo wekamu, sasiphuza, sicula futhi sidansa, futhi sabelana ngamava ethu nemizwa yethu.
Usuku lohambo olujabulisayo, noma uzizwa ukhathele kakhulu, kepha imizwa yabo bonke abantu ijabule kakhulu. Ngalo msebenzi weqembu, amalungu eqembu anemizwa eminingi: okokuqala, ukubaluleka kweqembu kuyazicacela, uma engekho amalungu ethimba lokubambisana, imizamo ehlangene, imigomo eminingi kunzima ukuyifeza; Okwesibili, ukuzimela ngokweqile kuyisihluthulelo sempumelelo, ubunzima bungokoqobo, bayazinqoba, badlale ngokusemandleni elungu ngalinye leqembu kuyisinyathelo sokuqala sokuthola impumelelo;
Okwesithathu, ukuxhumana kweqembu kubaluleke kakhulu, ukuxhumana okuningi, ukwabelana okuningi, imibono emihle nemibono kungathuthukiswa, futhi ekugcineni isisize siye kolunye uhlangothi lokunqoba. Uma ushiya inkundla yokuziqeqesha bese ubuyela endaweni ojwayele ukusebenza kuyo, sikholwa ukuthi inqobo nje uma sizodlala ngokugcwele kumoya weqembu wokwethembana futhi sithathe yonke imisebenzi njengezinselele zonke zokuqeqeshwa, ngeke kubekhona ubunzima esingenakukwazi hlula futhi ayikho inkinga esingenakuyixazulula!
Ikhukhi leLadyfinger, I-Hawthorn Strip, Induku entsha ye-Bean Curd, Amaphakethe Esoso Soy, Izingane Amabhisikidi, Ukudla Amakinati Anosawoti,